श्रीमतीले भनेपछि श्रीमानले बनाए ३ सय ६० डिग्री घुम्ने घर – OnlinePahar
पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, ०७ कार्तिक २०७८ आइतवारको राशिफल पढौं
२८ माघ २०७७, बुधबार १६:०५ Basanta Khanal	0 Comments
पत्नीले एउटै दृश्यलाई फरक–फरक कोणबाट हेर्ने इच्छा गरेपछि एक श्रीमान्ले ३ सय ६० डिग्री घुम्ने घर बनाएका छन् । यो अनौठो घर उत्तरी बोस्नियाको सर्बेक शहर नजिकैको एक मैदानमा छ । ‘हामीले पटक–पटक घर पुनर्निर्माण गरिसकेका थियौं र श्रीमतीको गुनासोले पनि मलाई थकित बनाइसकेको थियो,’ ७२ वर्षीया कुसिकले भने,‘त्यसपछि मैले पत्नीलाई भनें । म एउटा त्यस्तो घुम्ने घर बनाउँछु । जसलाई तिमीले इच्छाअनुसार घुमाउन सक्छौं ।’
अहिले सात मिटर क्षेत्रफलमा यो घर चारैतर्फ घुम्छ । यसमा बसेर मकैबारीदेखि जंगलसम्मले आफ्नो रुप बदलेको पल नियाल्न सकिन्छ । कुसिक भन्छन्,‘सबैभन्दा ढिला हुँदा यो घरले २४ घण्टामा एकपटक फन्को मार्छ । तर, गति तेज राखिएका बेला यसले २२ सेकेन्डमै फन्को मार्छ ।’
नयाँ घरलाई लिएर कुसिककी पत्नीले कुनै टिप्पणी भने गर्न चाहेकी छैनन् । निकोला टेस्ला र मिहाजलो पुपिनबाट प्रेरणा लिएर आफुले यो घर बनाएको कुसिकले बताएका छन् । ‘गरिब परिवारमा जन्मिएका कारण मैले राम्रो शिक्षा लिन पाइँन । त्यसैले आफैं केही गर्दै सिक्नुको विकल्प थिएन,’ उनले भने । source:ratopati
← निफ्राले घोषणा गरेको लाभांश संशोधन, नगद होइन बोनस शेयर दिने
सिटिजन्स बैंकले लाभांशको लागि साधारण सभा आह्वान गर्‍यो, बुकक्लाेज कहिले ? →
अस्पताल जान समस्या भएकाे छ ? निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरू (फोन नम्बरसहित)
२८ माघ २०७७, बुधबार १५:४३ Basanta Khanal	0
डा. भट्टराईलाई क्यान्सर देखिएन, चाँडै शल्यक्रिया चिकित्सकको सुझाव
२८ माघ २०७७, बुधबार १०:२९ Basanta Khanal	0
यो साता ७ कम्पनीको शेयर नेप्सेमा सूचिकृत, कुनको कत्ति ?